Imbali emfutshane yobuBuddha eJapan
Emva Kwamawaka Eminyaka, Ngaba UbuBuddha Buya eJapan Namhla?
Kuthatha iminyaka emininzi uBuddha ukuba ahambe esuka eIndiya aye eJapan. Emva kokuba iBuddhism isungulwe eJapan, kunjalo, yahluma. UbuBuddha babenempembelelo engafanelekanga kwimpucuko yaseJapane. Ngelo xesha, izikolo zaseBuddhism zangeniswa kwilizwe lonke laseAsia zahlukahlukana ngesiJapan.
Isingeniso seBuddha ukuya eJapan
Ngekhulu le-6 - mhlawumbi i-538 okanye i-552 CE, kuxhomekeke kwimbali-mlando efundwayo-iindwendwe ezithunyelwa yinkosana yaseKorea zafika enkundleni yoMlawuli waseJapan.
AmaKorea azisa neBuddhist sutras, umfanekiso kaBuddha, kunye nencwadi evela kwisikhulu saseKorea idumise i-dharma. Oku kwakungeniswa ngokusemthethweni kweBuddha eJapane.
I-Japan yobuKristu isahlukaniswa ngokukhawuleza ibe ngamaqela anxamnye nama-Buddhist. UbuBuddha bwamkelwa ngokwenene kwada kwaba yilawula ukubusa kwe- Empress Suiko kunye ne-regent yayo, iPrince Shotoku (592 ukuya ku-628 CE). I-Impress kunye neNkosana yamisa ubuBuddha njengenkolo kaRhulumente. Baye bakhuthaza intetho ye-dharma kwezobugcisa, ububele kunye nemfundo. Bakha amatempile baze bamise iinqonta.
Kwiminyaka eminyaka eyalandela, amaBuddha eJapan aqhubela ngamandla. Ngexesha le-7 ukuya kweyesi-9 leminyaka, ubuBuddha baseChina babenandipha "ubudala begolide" kunye neentlanga zaseTshayina zenze i-intanethi ngokutsha kunye nokufundiswa eJapan. Izikolo ezininzi zeBuddhism ezakhiwa e-China nazo zasekwa eJapan.
Ixesha lokuBuddha lobuNara
Izikolo ezithandathu zeBuddhism zavela eJapan kwiminyaka ye-7 neye-8 kwaye zonke ezo zimbini ziye zaphela. Ezi zikolo zihlume kakhulu kwixesha leNara lembali yaseJapan (709 ukuya ku-795 CE). Namhlanje, ngamanye amaxesha baxhamla ndawonye kunye neqela elibizwa ngokuba yiNara Buddhism.
Ezi zikolo ezimbini ezisezinye zilandelayo zi-Hosso noKegon.
Hosso. I-Hosso, okanye i-"Dharma Character," isikolo, yaziswa eJapane ngumbonaki uDosho (629 ukuya ku-700). UDosho waya eChina ukuba afunde noHsuan-tsang, umsunguli we-Wei-shih (obizwa ngokuba yi-Fa-hsiang) yesikolo.
U-Wei-shih waveliswa esikolweni saseYogachara saseIndiya. Kulula kakhulu, uYogachara ufundisa ukuba izinto azikho into ebonakalayo kuzo. Inyaniso esiyicinga ukuba siyayiqonda ayikho ngaphandle kwenkqubo yokwazi.
Kegon. Ngomnyaka we-740 umnina waseTshayina uShen-hsiang wazisa iHuayan, okanye "i-Flower Garland," isikolo eJapan. Ebizwa ngokuba nguKegon eJapan, esi sikolo saseBuddhism siyaziwa kakhulu ngeemfundiso zayo ekuhambeni kwazo zonke izinto.
Oko kukuthi, zonke izinto kunye nezidalwa azibonakalisi kuphela ezinye izinto kunye nezidalwa kodwa nazo zonke i-Absolute ngokupheleleyo. Isalathiso se-Indra's Net sinceda ukucacisa le ngcamango yokubambisana kwazo zonke izinto.
UMlawuli uShomu, owawulawula ukususela ngo-724 ukuya ku-749, wayengumphathiswa kaKegon. Waqala ukwakha i-Todaiji enhle, okanye i-Great East Monastery, e-Nara. Iholo elikhulu likaTitaiji liyakhiwo esikhulu kunazo zonke zehlabathi kuze kube namhlanje. Ihlala kwiBuddha Enkulu yaseNara, isibalo esikhulu sebhesi esiyimitha ezili-15, okanye malunga neenyawo ezili-50, ubude.
Namhlanje, uToyaiji uhlala ephakathi kwesikolo saseKegon.
Emva kwexesha leNara, ezinye izikolo ezihlanu zeBuddhism zavela eJapan ezihlala zibalulekileyo namhlanje. Ezi ziTendayi, Shingon, Jodo, Zen, kunye neNichiren.
I-Tendai: Gxila kwiLotus Sutra
Umonki uSaicho (767 ukuya ku-822; obizwa nangokuthi nguDengyo Daishi) waya eChina ngo-804 waza wabuyela kunyaka olandelayo ngeemfundiso zesikolo saseTyantai . Ifom yaseJapan, iTendai, yavuka ngokukhawuleza kwaye yayisikolo esiphezulu seBuddhism eJapan ngeenkulungwane.
I-Tendai iyaziwa ngokubanzi kwizinto ezimbini ezihlukeneyo. Enye, ibona iLotus Sutra ibe yi-sutra ephezulu kwaye ibonakalisa imfundiso yeBuddha. Okwesibini, idibanisa iimfundiso zezinye izikolo, isombulula ukungqubuzana nokufumana indlela ephakathi phakathi kokugqithisa.
Igalelo elithile likaSaicho kwiBuddhism yaseJapan kwakusungulwa kweziko elikhulu lemfundo noqeqesho loBhuda eMount Hiei, kufuphi nenkunzi entsha yaseKyoto.
Njengoko siza kubona, amaninzi amaninzi eembali zeBuddha zaseJapan aqala ukufundisisa uBuddha kwiNtaba yeHiii.
IShingon: Vajrayana eJapan
NjengoSaicho, umonki uKukai (774 ukuya ku-835; naye ubizwa ngokuba nguKobo Daishi) waya eChina ngo-804. Wayefunda khona uBuddhist tantra waza wabuya iminyaka emibili kamva ukuseka isikolo saseJapan saseShingon. Wakhela iindwendwe kwiNtaba yeKoya, malunga neekhilomitha ezingama-50 ngasezantsi kweKyoto.
I-Shingon yiyena kuphela isikolo esingesiTibetan saseVajrayana . Ininzi yeemfundiso kunye nemikhuba yeShingon i-esoteric, idluliselwa ngomlomo ukusuka kumfundisi ukuya kumfundi, kwaye ayifumanwanga esidlangalaleni. I-Shingon ihlala enye yezona zikolo ezinkulu kunazo zonke zobuBuddha eJapan.
UJodo Shu noJodo Shinshu
Ukuze ahloniphe isifiso sikayise sokufa, u-Honen (1133 ukuya ku-1212) waba ngumonki kwi-Mount Hiei. Enganeliseki ngeBuddhism njengoko yafundiswa kuye, u-Honen wazisa isikolo saseShayina selizwe elungileyo ukuya eJapan ngokusungula uJodo Shu.
Umhlaba omsulwa ugxininisa ukholo uBuddha Amitabha (Amida Butsu ngesiJapane) ngokuthi ubani angazaliswa kwakhona kwiLizwe eliQinisekileyo kwaye abe kufuphi neNirvana. Ngamanye amaxesha umhlaba othiwa yi-Amidism.
U-Honen waphenduka enye intaba yaseMount Hiei, iShinran (1173-1263). UShinran wayengumfundi ka-Honen iminyaka emithandathu. Emva kokuba u-Honen ethinjelwe ngo-1207, uShinran washiya izambatho zakhe, waza watshata waza wazala abantwana. Njengomgcini, wasungula uJodo Shinshu, isikolo saseBuddhism sabantu. UJodo Shinshu namhlanje lihlelo elikhulu kunazo zonke eJapan.
UZen Uza eJapan
Ibali leZen eJapan liqala ngo-Eisai (1141 ukuya ku-1215), umonki owashiya izifundo zakhe eNtabeni iHii ukuba afunde i-Chan Buddhism eChina.
Ngaphambi kokuba abuyele eJapan, waba yindlalifa yeHsu-Huai-ch'ang, utitshala waseRinzai . Ngaloo ndlela u-Eisai waba nguKhinani wokuqala okanye, ngesiJapan, inkosi yaseZen eJapan.
Umzila weRinzai owasekwa nguEisai awuyi kuhlala; I-Rinzai Zen eJapan namhlanje iphuma kwamanye amanqanaba ootitshala. Omnye umonki, owayefunde ngokufutshane phantsi ko-Eisai, wayeza kusungula isikolo sokuqala seZen eJapan.
Ngo-1204, uShogun wamisela u-Eisai ukuba abe ngu-abbot waseKennin-ji, i-monasteri yaseKyoto. Ngomnyaka we-1214, umonki osemtsha ogama linguGenen (1200 ukuya ku-1253) weza eKennin-ji ukuze afunde iZen. Xa u-Eisai wafa unyaka olandelayo, u-Dogen waqhubeka nokufunda ngeZen kunye no-Eya, uMyozen. Inja yafumana ukuhanjiswa kwe-dharma - ukuqinisekiswa njenge-Zen master - ukusuka eMyozen ngo-1221.
Ngo-1223 inja kunye noMyozen baya eChina bafuna abaphathi beChin. I-Dogen yabona ukuqonda ngokucacileyo xa efunda noTien-t'ung Ju-ching, inkosi yaseSoto , eyanikezela ukuhanjiswa kweDenen.
Inja yabuyela eJapan ngo-1227 ukuba ichithe ubomi bakhe bonke efundisa iZen. Inja ngu-dharma ukhokho wabo bonke amaJapane aseSoto Zen amaBuddha namhlanje.
Umzimba wakhe wokubhala, othiwa nguShobogenzo , okanye " uNondyebo weNyaniso yeDarma Eye ," uhlala usephambili kwiJapan yaseJapan, ngokukodwa kwisikolo saseSoto. Kwakhona kuthathwa njengenye yemisebenzi evelele yeencwadi zonqulo zaseJapan.
I-Nichiren: I-Reformer yoMlilo
U-Nichiren (1222 ukuya ku-1282) wayengumlamki nomguquleli owasekwa isikolo saseJapan seBuddhism.
Emva kweminyaka ethile yokufunda kwi-Mount Hiei nakwezinye iidolophu, uNichiren wayekholelwa ukuba iLotus Sutra iqulethe iimfundiso ezipheleleyo zeBuddha.
Waqulunqa i- daimoku , isenzo sokubetha ibinzana elithi Nam Myoho Renge Kyo (Ukuzinikela kuMthetho we-Mystic weLotus Sutra) njengendlela elula, ecacileyo yokufumana ukukhanya.
UNichiren wayekholelwa ngokunyanisekileyo ukuba yonke iJapan kufuneka ikhokelwe yiLotus Sutra okanye ilahlekelwe ukukhuselwa kunye nokuthanda uBuddha. Wayegweba ezinye izikolo zeBuddhism, ngokukodwa indawo efanelekileyo.
Isiseko saseBuddhist sagxeka ngoNichiren waza samthumela kwisiqulatho sabathinjwa esadla ubomi bakhe bonke. Nangona kunjalo, wathola abalandeli, kwaye ngexesha lokufa kwakhe, ubuBuddha bobuNichiren buqiniswe eJapan.
UbuBuddhism baseJapan Emva kweNichiren
Emva kweNichiren, akukho zikolo eziphambili zeBuddhism ezenziwe eJapan. Nangona kunjalo, izikolo ezikhoyo zikhulile, zaguquka, zahlula, zahlanjululwa, kwaye zenziwa ngeendlela ezininzi.
Ixesha leMuromachi (1336 ukuya ku-1573). Inkcubeko yamaBuddha yamaJapan ekhulisa ngekhulu le-14 kunye neempembelelo zeBuddha zaboniswa ngobugcisa, inkondlo, izakhiwo, ukulima, kunye nomkhosi weti .
Kwixesha leMuromachi, izikolo zaseTendai naseShingon, ngokukhethekileyo, zazinandipha ukuthanda isiJapane. Ekuhambeni kwexesha, olu lukholo lukhokelela ekubambisaneni, okwamanye amaxesha waba ngugonyamelo. Indwendwe yaseShingon kwiNtaba iKoya kunye neendwendwe zeTendai kwiNtaba yeHii yaba ngamagosa aphethwe ngabakhokheli belifa. Ububingeleli be-Shingon kunye neTendai bafumana amandla opolitiko nempi.
Ixesha leMoyoyama (1573 ukuya ku-1603). Umkhosi we-Oda Nobunaga wagumbuqela urhulumente waseJapan ngowe-1573. Wahlasela i-Mount Hiei, iNtaba iKoya kunye namanye amathempeli amaBuddha amakhulu.
Ininzi yeendwendwe kwiNtaba yeHii yachithwa kwaye iNtaba iKoya yayilondolozwe kangcono. Kodwa i-Toyotomi Hideyoshi, umlandeli kaNobunaga, waqhubeka nokucinezelwa kwamaziko eBuddhist de kube bonke belawulwa phantsi kwakhe.
Ixesha le-Edo (1603 ukuya ku-1867). I-Tokugawa Ieyasu yasungula i-shogunate yaseTokugawa ngo-1603 kwinto eyiTokyo. Ngeli xesha, ezininzi zeetempile kunye neendwendwe ezidityaniswe yiNobunaga neHideyoshi zakha kwakhona, nangona kungenjalo njengezakhiwo ezinjengalezo ngaphambili.
Impembelelo yobuBuddha yancipha, nangona kunjalo. UbuBuddha babhekana noqhankqalazo lwaseShinto - inkolo yobuNtu baseJapan - kunye neConucucianism. Ukugcina abahluleli abathathu bahlukana, urhulumente wachaza ukuba ubuBuddha buya kuba neyokuqala kwimicimbi yonqulo, iConucucian iya kuba yindawo yokuqala kwimicimbi yokuziphatha, kwaye i-Shinto yayiza kuqala kwimicimbi yombuso.
Ixesha leMeji (1868-1912). Ukubuyiselwa kweMeiji ngo-1868 kubuyisele amandla kaMlawuli. Kwinkonzo karhulumente, uShinto, umbusi wayekhunjulwa njengonkulunkulu ophilayo.
Umlawuli wayengengunkulunkulu eBuddhism, nangona kunjalo. Yingakho urhulumente waseMeiji wayala ukuba ubuBuddha baxoshwe ngo-1868. Iitempile zatshiswa okanye zatshatyalaliswa, kwaye ababingeleli kunye neentloko baphoqeleka ukuba babuyele ekubekeni ubomi.
UbuBuddha bomelele kakhulu kwinkcubeko yaseJapan kunye nembali ukuba yanyamalala, nangona kunjalo. Ekugqibeleni, ukuxothwa kwaphakanyiswa. Kodwa urhulumente waseMeiji awunakwenziwa ngoBuddha.
Ngomnyaka we-1872, urhulumente waseMeiji wathi ama-monkshi namaBuddha (kodwa angabonisi) kufuneka akhululeke ukutshata ukuba bakhetha ukwenza njalo. Kungekudala "imindeni yeetempile" yaba yindawo eqhelekileyo kwaye ukulawulwa kweetempileni kunye neendlunkulu zaba ngamashishini osapho, azinikezelwa kooyise oonyana.
Emva kwexesha le Meiji
Nangona kungekho zikolo ezinkulu zeBuddhism zisekwe ukususela ngo-Nichiren, akuzange kubekho isiphelo sokutshutshisa ukusuka kumaqela amakhulu. Kwakungekho siphelo "samacandelo" ehlanganisiweyo ukusuka kwisikolo esingaphezu kwesinye seBuddhist, ngokuqhelekileyo kunye neenkcukacha zeShinto, iConucucianism, iTaoism, kwaye, ngoku kutshanje, ubuKristu buxoshelwa kwakhona.
Namhlanje, urhulumente waseJapan uyazifumana izikolo ezingaphezu kwezi-150 zeBuddhism, kodwa izikolo eziphambili ziyiNara (ikakhulukazi iKegon), iShingon, iTendai, Jodo, Zen, kunye neNichiren. Kunzima ukwazi ukuba bangaphi abantu baseJapan abanxulumene nesikolo ngasinye kuba abaninzi abantu bathi baninzi kunqulo olunye.
Kwiminyaka yakutshanje, amabali ambalwa eendaba axelele ukuba ubuBuddha bufa eJapan, ngakumbi kwimimandla yasemaphandleni.
Kwizizukulwana, amaninzi amancinci "asetshentsheni" ayenomsebenzi wokungcwaba kunye nomngcwabo waba ngumthombo oyintloko wemali engenayo. Oonyana bathatha iithempelesi kooyise ngaphandle komsebenzi ngaphezu koqeshiso. Xa zidibaniswe, ezi zinto zibini zenza ubuBuddha buninzi kwi-"Buddhism yomngcwabo." Amathempeli amaninzi anikezela ngenye into ngaphandle kokungcwaba kunye neenkonzo zesikhumbuzo.
Ngoku iindawo ezisemaphandleni zichitha kwaye iJapane ehlala kwizixeko zasezidolophini zilahlekelwa ngumdla kwiBuddha. Xa amaJapan amancinci kufuneka acwangcise umngcwabo, baya emakhayeni omngcwabo ngakumbi kunamahempile eBuddhist. Abaninzi banqumla imingcwabo ngokupheleleyo. Ngoku iithempile ziyavalwa kwaye ubulungu kwiitempile ezisele ziwa.
Abanye baseJapan bafuna ukubona ukubuyela kwi-celibacy kunye neminye imithetho yangaphambili yamaBuddha yama-monks avunyelwe ukuba aphumelele eJapan. Abanye bakhuthaza ububingeleli ukuba banakekele ngakumbi intlalontle kunye nothando. Bakholelwa ukuba oku kuya kubonisa ukuba iJapan ukuba abafundisi bamaBuddha bafanele into ethile ngaphandle kokungcwaba.
Ukuba akukho nto iyenziwe, ngaba iBuddhism yaseSaicho, Kukai, Honen, iShinran, Dogen, kunye neNichiren iya kuvela eJapan?
I-Soka Gakkai International: Ixesha elidlulileyo, elikhoyo, elizayo
IQiniso EliBili Eliyinyaniso
Iinkolelo zePriptized Baptist and Practices
9 Great Taoism Books kubaQala
I-Dinosaurs Eyona Yona Yibalulekileyo YaseYurophu
Iingoma ezi-15 zeeLwimi eziPhambili zeDontemporary Rock
IAlbhamu zeTestamente ezilungileyo
Imbali yabaBhali beVideo - iTape yeVidiyo kunye neKhamera
Ukuphononongwa kwe-Piano ye-Digital Piano Yamaha P95
Annapurna: 10 iNtaba ephakamileyo kunazo zonke kwihlabathi
Itheyibhile yoTyunjwa kwiItranshi yesiTaliyane
Apho i-Dinosaurs ikhona-i-World's Most Important Fossil Formations
I-Hollywood Undead: Kwi-Edge
Iimvumi ze-Pop eziye zafa ngo-2000
I-Biography kunye neProfayili kaDaniel Cormier
Indlela yokuSebenzisa kunye neleyo
Indlela yokusebenzisa iifom ezahlukeneyo zeeNgxelo
Ngaba iSt. Petersburg eyaziwa ngokuba nguPetergrad noLeningrad?
10 Iinkcukacha NgeDodo Bird
UChris Rice - I-Biography ye-Christian Singer / I-Songwriter Chris Rice
Iveki Yesihe Somoya
Ukusebenzisa iikhukhi nge-PHP